Maalinta: Abriil 28, 2020
Taksi Bilaash ah laga bilaabo UBER ilaa Xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka
Uber, si ay u taageeraan dagaalka ka dhanka ah cudurka faafa ee geedi socodka Covidien-19 ee Turkey, xirfadlayaasha caafimaadka ee ka shaqeeya Istanbul jidka guriga ka soo isbitaalka si ay tagaasida jaallaha ah oo u oggolaan doonaa in ay isticmaalaan oo lacag la'aan ah "Taxi caafimaad" adeeg ganacsi kortaan free 5000 ka [More ...]
Aaladda CW Energy oo ay Weheliso Aagagga Wershadaha
Isbedelada ka socda Aagagga Dhaqan Ahaan Aasaasiga ah (OIZ), oo ay warshadayaashu sugayeen muddo dheer, ayaa ka dhigay warshadaha inay dhoola cadeeyaan. Mid ka mid ah hal-abuurnimada ka soo baxday filashada aagag badan waxay ahayd in la furo dariiqa korantada looga dhaliyo tamarta qorraxda. Sidaas awgeed, [More ...]
Hawlaha Balaarinta Wadooyinka ee degmooyinka Balıkesir way sii socdaan
Degmada Balıkesir Waxay fulisaa ballaarinta wadooyinka iyo howlaha horumarinta ee degmooyinka Dursunbey iyo Marmara iyadoo lala kaashanayo degmooyinka degmada. Muwaadiniintu waxay awoodi doonaan inay si nabadgelyo leh ugu safraan waddooyinka loo qorsheeyay in la dhammeeyo sida ugu dhakhsaha badan. [More ...]
Suuqa mobilada wuxuu ku sugnaa Gaziemir, Narlıdere iyo Balçova Maanta
Izmir degmada Metropolitan bilaabay by tusaale ahaan reer Turkey ee Buca oo maanta suuqa mobile Gaziemir, Narlıdere oo ahaa Balçova'nın. Khudaarta iyo miraha la keenay guryaha ayaa la kulma baahiyaha shacabka iyagoon u aadin suuqa ama suuqyada. [More ...]
Darawalada Ka Soo Qaada Xamuulka Bartamaha Eeshiya Kusoocayn Mayaan Haddii Ay Raacaan Xeerarka
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Adil Karaismailoğlu, oo khadka taleefanka kula wadaagaya Madaxweyne Erdogan oo la yeeshay Madaxweynaha Ruushka todobaadkii hore, ayaa ka codsaday kooxda Ruushka inay yareeyaan muddada karantiilnimada darawalada ganacsi ahaan u maareeya. [More ...]
Ka bixitaanka tareenka weyn ee ka dhoofaya Kars Abriil 18, Waxaa furay Caspian
Khadka ka dhoofaya Giant ee Ka Imaanaya Kars Abriil 18 ayaa loo furay Caspian-ka; dalalka Brother ka Turkey, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan iyo 940 meter waxa lagu xiraa in tareenka ee alaabta weel dhoofiyo 82 Baku Alat Uzbekistan [More ...]
Marxaladda naqshadeynta halista ah ee F-16 Dagaalkii elektiroonigga ahaa iyo nidaamyadii taageerada ayaa la dhameystiray
Marka la eego baaxadda Mashruuca F-16 ee Elektaroonigga ah ee Mashruuca Dagaallada ee ay fuliso TÜBİTAK-BİLGEM, wejiyada naqshadeynta halista ah ee nidaamyada EHPOD iyo EDPOD ayaa si guul leh lagu soo gabagabeeyey. Iyada oo ku saleysan baahiyaha Taliska Ciidanka Cirka Turkiga, Macluumaadka TÜBİTAK iyo Amniga Amniga Sare Sare [More ...]
Shan Qeybood Oo Ay Soo Wada Qaateen Qeybta BM Makina Group Roof
BM Makina, oo sameysa wax soo saarkooda iyo waliba magacyada ay matalaan, ayaa ku soo ururay shan nooc oo ka mid ah dalladda BM Makina Grup. Intaa ka dib; Vahle, lifaaqa, BKB, KATO, magacyada DEMYKS oo wata BM Makina Grup [More ...]
Madaarka Mardin iyo Diyaaradda Rakaab ka timid Iiraan ayaa la kala qaaday
Marka la eego baaxadda tallaabooyinka laga qaaday cudurka faafa ee cudurka 'coronavirus', Mardin Metropolitan Degmadu waxay sii waddaa hawlaheeda wasakhda iyo kormeerka ee magaalada oo dhan. Madaarka Mardin waxaa ku jabay diyaaraddii siday muwaadiniinteena ka soo laabtay dalka Iran. dhexmaray [More ...]
Khadadka Wadooyinka iyo Calaamadaha Gawaarida ayaa dib looga cusboonaysiiyey Manisa
Waaxda Gaadiidka Dawladaha Hoose ee Magaalada Manisa ayaa cusboonaysiisay khadadka wadooyinka iyo tilmaamayaasha taraafikada, kuwaas oo noqday kuwo gaboobay isla markaana lumiyay aragooda waqti kadib, si loo hubiyo amniga taraafikada. Dowladda Hoose ee Magaalada Manisa, badbaadada taraafikada ee bartamaha magaalada [More ...]
Dariiqyada Magaalada ee mashquulka badan ayaa afar maalmood lagu dhigay Mersin!
Kooxahan ku lugta leh Howlaha Dayactirka iyo Dayactirka Jidadka Dowlada Hoose ee Magaalada Mersin waxay ka fuliyeen wadooyinka mashquulka badan ee magaalada, iyagoo ka faa'ideysanaya bandoowga 4-maalmood. In kasta oo uu cudurka dillaacay coronavirus, waa inuu shaqeeyaa [More ...]
Duqa Magaalada Kaahin: 'tunkiga Karşıkaya wuxuu sida ugu dhaqsaha badan u dhamaan doonaa'
Duqa Magaalada Gaziantep Fatma Şahin waxay baartey shaqadii ay ka bilowdey dariiqa weyn halkaasoo gaadiidkii gawaarida uu hoos u dhacay nooca cusub ee cudurka 'Corona Virus' (COVID-19). La sheekaysiga farshaxanleyda deegaanka, Şahin, [More ...]
Bayaanka Madaxweynaha Wershadaha Gaashaandhigga DEMİR S-400 Bayaanka
Madaxweynaha warshadaha Difaaca Madaxtooyada Turkiga. Dr. İsmail Demir wuxuu martida u ahaa toosinta tooska ah ee TRT Haber, iyadoo lagu dhawaaqayo Ahmet Görmez. Laxiriirta firfircoonida Nidaamka Gantaalaha Caymiska Hawada S-400 (HSFS) oo ay maamusho Görmez [More ...]
Khariidadaha Si Nolosha Ugu Fududeeya Goobaha ANKARAY
Agaasinka Guud ee EGO wuxuu sii wadaa inuu nolosha u fududeeyo muwaadiniinta adeegsada gaadiidka dadweynaha ee Başkent. Khariidadaha qorshaha deegaanka ayaa lagu meeleeyay Xarummaha ANKARAY; muhiim ah sida cosbitaalka ugu dhow, iskuulka, jaamacadaha iyo dhismayaasha dadweynaha ee xarunta [More ...]
Akhbaarta wanaagsan ..! Wadida Tijaabada ayaa ka bilaabatay Wadada tareenka ee Samsun Sivas
Wadista tijaabada ee Wadada Tareenka ee Samsun-Sivas (Kalin), oo dib loo dhigay illaa iyo Disember 2017, waxay bilaabatay Abriil 27, 2020. Tareenka tijaabada ah ee ka baxaya Sivas (Kalın) wuxuu yimid Samsun. Waqtiyada caadiga ah MAY 5, Mid kasta oo ka mid ah imtixaanka [More ...]
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Shiinaha ayaa ka soo iibsatay dalka Shiinaha 176 metro metro oo loogu talagalay garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul. Gaarsiinta dhammaan gawaarida metro ayaa la dhameystiri doonaa dhamaadka 2022. Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha Kaabayaasha Kaabayaasha dhaqaalaha General [More ...]
Azerbaijan ka Turkey KNT-76 SRifle Diyaarinta si Buy
Azerbaijan wasaaradda gaashaandhigga, ka Turkey Farsamada iyo Chemical Industry Corporation (MKEK) horumariyo by KNT-76 ayaa isku diyaarinaya in ay soo iibsato SRifle. KNT-76 7.62x51mm Manga Nooca, oo ay ku sameysay tas-hiilaad guri oo ay sameysay Shirkadda Warshadaha Warshadaha Kimikada [More ...]
Oyak Renault, oo joojiyay wax soo saarkii Bursa iyada oo loo adeegsaday cabirkii 19-aad, ayaa mar kale la bilaabay wax soo saarka. Ku dhawaad ​​7 kun oo shaqaale ah ayaa bilaabay shaqo iyagoo leh talaabooyin is-daba joog ah. [More ...]
Wasiirka Gaadiidka Karaismailoğlu ayaa la kulmay dhiggiisa Kazakh
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoğlu ayaa khadka taleefanka kula xiriiray Wasiirka Warshadaha iyo Kaabayaasha Atamkulov. Labada Wasiir ayaa sheegay in xiriirka labada dal ee dhanka gaadiidka ay ugu yaraan saameyn ku yeelan karto dillaaca coronavirus. [More ...]
Halkalı Khadka Tareenka Kapıkule ee Adeegga Adeegga 2023
Adil Karaismailoğlu, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa yiri,Halkalı- Khadka tareenka ee Kapıkule waxaa la adeegsan doonaa sanadka 2023. In kasta oo aasaaska u dhigney bishii Sebtember ee sanadkii hore, waxaan sameynay horumar la taaban karo oo ah 10 boqolkiiba mashruuca ” [More ...]
Maanta taariikhda: 28 April 1886 Mersin-Tarsus-Adana Tareenka
28 April 1886 Mersin-Tarsus-Adana Dhismaha wadada tareenka waxaa dhameeyay 3. 28 APRIL 1921 Erzurum, Erzincan, Samsun, Miisaaniyadda loo qoondeeyey Wasaaradda Hawlaha Guud ayaa loo sameeyay dhisidda waddada basaska.